युक्रेनबाट ३०२ जना नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो, रुसमा रहेका नेपाली चिन्तित – Nep Stok
युक्रेनबाट ३०२ जना नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो, रुसमा रहेका नेपाली चिन्तित
फागुण १८, २०७८ बुधबार 181
काठमाडौं। रुस–युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रबाट ३०२ जना नेपालीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । युक्रेन समेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले पोल्याण्ड, स्लोभाकिया, हंगेरी, रोमानिया र माल्दावा लगायतका देशमा नेपालीलाई सारिएको जानकारी दिएका हुन् ।
रुस–युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्चस्तरीय समितिको बैठकलाई मंगलवार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिका अनुसार मंगलवारसम्म २ सय ३२ जना पोल्याण्ड, ३९ जना स्लोभाकिया, ४ जना हंगेरी, २३ जना रोमानिया र ४ माल्दावा पुगेका छन् ।
यसअघि समितिका अध्यक्षसमेत रहेका राजदूत खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले युद्धका कारण विस्थापित नेपालीहरुलाई सुरक्षित स्थानान्तणका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उद्धार समितिका संयोजक तथा एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले रुसमा रहेका नेपालीहरुले समेत नियमित रुपमा युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुसँग सम्पर्क रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले एनआरएनए पोल्याण्डको सक्रियतामा आर्थिक सहयोग संकलनको तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
रुसका लागि कार्यवाहक राजदूत सुशील घिमिरेले युक्रेनको राजधानी किभमा रहेका सबै नेपालीहरुले युक्रेन छोडेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा रुसमा रहेका नेपाली विधार्थीहरु चिन्तित रहेर दूतावासको सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए ।
पश्चिमी मुलुकहरुले रुसी हवाई उडानमा प्रतिवन्ध लगाएका कारणले रुसमा बस्ने नेपालीहरुमा समेत संसय थपिएको बताए ।
बैठकमा स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. बोध सुवेदीले गैरआवासीय नेपाली संघले अप्ठ्यारामा परेका नेपालीलाई खाना बस्नको व्यवस्था गरेको जनाए । सुवेदीले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुको संख्या सोचे भन्दा अझ बढी हुनसक्ने समेत बताए ।
समितिका सदस्य सचिव चिरन्जीबी खड्काले अत्याधिक चिसोका कारणले युद्ध पीडित नेपालीहरु थप समस्यामा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
Prevपल शाह प्रकरणमा एक पछि अर्की नायिका बोल्दै, बोलिन नायिका सञ्चिता लुइँटेल पनि
Nextपल शाह प्रकरणमा नायिका विनिता पनि बोलीन्, भन्छिन् मैले छोरीहरूलाई कसरी बचाउने ?
बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य र प्रेम सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
पलले नै घात गर्यो अब हामी पनि बोल्छौँ : गायक दुर्गेश थापा, (अडियो रिपोर्ट सहित )